Kutonga kwakarurama kwenhungirwa yaJese (1-10)
Mhumhi negwayana zvichagara pamwe chete (6)
Nyika ichazara nekuziva Jehovha (9)
Vakasara vanodzoswa (11-16)
11 Pachigutsa chaJese+ pachabuda nhungirwa,+Uye bukira+ rinobva pamidzi yake richabereka zvibereko. 2 Mweya waJehovha uchagara paari,+Mweya weuchenjeri+ uye wekunzwisisa,Mweya wekupa mazano uye wekuva nesimba,+Mweya wekuziva uye wekutya Jehovha. 3 Uye achafarira chaizvo kutya Jehovha.+ Haazotongi nezvaanoona nemaziso ake,Kana kutsiura nezvaanongonzwa nenzeve dzake.+ 4 Achatonga vakaderera zvakanaka,*Uye achatsiura nekururama achiitira vanyoro venyika. Acharova nyika neshamhu yemuromo wake+Uye achauraya munhu akaipa nemweya wekufema* wemuromo wake.+ 5 Kururama kuchava bhandi remuchiuno chake,Uye kutendeka bhandi rehudyu dzake.+ 6 Mhumhi ichagara negwayana kwenguva diki,+Uye mbada icharara pasi nembudzi diki,Uye mhuru neshumba* nemhuka yakakodzwa zvichava pamwe chete;+Uye kakomana kachazvitungamirira. 7 Mhou nebheya zvichafura pamwe chete,Uye vana vazvo vacharara pasi pamwe chete. Shumba ichadya uswa semombe.+ 8 Mwana anoyamwa achatamba panogara mhungu,Uye mwana akarumurwa achaisa ruoko rwake panogara nyoka ine uturu. 9 Hazvizombokuvadzi+Kana kuparadza pagomo rangu rese dzvene,+Nekuti chokwadi nyika ichazara nekuziva JehovhaSekufukidzwa kwakaitwa gungwa nemvura.+ 10 Pazuva iroro mudzi waJese+ uchamira sechiratidzo* kumarudzi.+ Marudzi achaenda kwaari kuti atungamirirwe,*+Uye nzvimbo yake yekuzororera ichakudzwa. 11 Pazuva iroro Jehovha achapazve ruoko rwake, kechipiri, kuti atore vanhu vake vashoma vakasara kuAsiriya,+ kuIjipiti,+ kuPatrosi,+ kuKushi,+ kuEramu,+ kuShinari,* kuHamati, nekuzvitsuwa zvegungwa.+ 12 Achamisira marudzi chiratidzo,* ounganidza vaIsraeri vakapararira,+ uye achaunganidza vaJudha vakapararira achivabvisa kumativi mana enyika.+ 13 Godo raEfremu richapera,+Uye vaya vanovenga Judha vachaparadzwa. Efremu haazoitiri Judha godo,Uyewo Judha haazovengi Efremu.+ 14 Vachadzika nekukurumidza pamateru* evaFiristiya nechekumavirira;Vachabatana pakupamba vanhu vekuMabvazuva. Vachatambanudza ruoko rwavo kuti varwise Edhomu*+ neMoabhi,+Uye vaAmoni vachava pasi pavo.+ 15 Jehovha achaparadzanisa* chikamu chegungwa reIjipiti,+Uye achafambisa ruoko rwake pamusoro peRwizi.*+ Acharurova muhova dzarwo* nomwe nemweya wake wekufema unopisa,Uye achaita kuti vanhu vayambuke vakapfeka shangu dzavo. 16 Uye pachava nemugwagwa mukuru+ unobva kuAsiriya nekuda kwevashoma vasara pavanhu vake,+Sewaivapo kuvaIsraeri pazuva ravakabuda munyika yeIjipiti.
^ Kana kuti “neshumba yava nezenze.”
^ Kana kuti “sebango rechiratidzo.”
^ Kana kuti “Marudzi achamutsvaga.”
^ Kana kuti “kuBhabhironia.”
^ ChiHeb., “papfudzi.”
^ Kana kuti “Vachaita kuti simba ravo risvike kuEdhomu.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “achaomesa.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kuti ruve hova.”